वि लभ चौतारीमा हार्दिक स्वागत छ । - page 18 - Announcement - Bridge to Nepal & Nepali
Author Topic: वि लभ चौतारीमा हार्दिक स्वागत छ । (Read 13134 times)
« Reply #255 on: August 01, 2011, 11:10:59 AM »
JA BHAYENI BHET HUN6 HOLA RE K
« Reply #256 on: August 01, 2011, 12:28:51 PM »
lu happy frenshipday hai sabai sathiharu lai
« Reply #257 on: August 01, 2011, 10:16:52 PM »
SAME2U AXIS......
« Reply #258 on: August 02, 2011, 12:10:39 AM »
Quote from: axis on August 01, 2011, 12:28:51 PM
« Reply #259 on: August 02, 2011, 02:06:18 AM »
Quote from: काली on August 02, 2011, 12:10:39 AM
« Reply #260 on: August 15, 2011, 03:57:32 AM »
कहिले काही आफैले बोलेका लेखेका कुराहरु दोहोर्‍याएर हेर्दा रमाईला लाग्ने रैछन । आज चौतारीको पुराना पोष्टहरु हेरेर मज्जाले हाँसे । समय र परिस्थिती सँगै जिन्दगीका भोगाईहरुका प्रत्येक पलहरु ऋतु जसरी फेरिन्दै जाँने रहेछन । तर त्यो क्षण त्यो पल सबै कागजका पन्नाहरुमा उतारेर राख्न पाए कति मीठो अतित बन्दो रैछ । थाहै नपाई यही चौतारीमा जीवनका धेरै बसन्तहरु बितेछन । उज्याला अन्ध्यारा ति सबै पलहरुलाई समेटेर राखिदिने चौतारी धन्य छ तिमीलाई !!!
« Reply #261 on: August 16, 2011, 08:25:52 AM »
Quote from: काली on August 15, 2011, 03:57:32 AM
HO BHANE KAHILE KAHI AAFU LE LEKHEKA ,KABITA.MUKTAK,SAYARI HARU PADHDA PANI AAFU LE LEKHEKO JUSTO LAGDAINA.....KUN MOOD MA KASARI LEKHIYO THAHA NAI HUNNA.......
« Reply #262 on: September 07, 2011, 04:55:07 AM »
मान्छे आफैले आफैलाई जलाएर निस्केको तापबाट आफूलाई सेकाएर मात्र जिन्दगीमा सन्टुष्टी पाउछ । वास्तवमा मान्छे सुखको चाहनामा आफैलाई दु:खको सागरमा धकेलिरहेको हुन्छ । मान्छेहरु भन्छन म सुखको खोजिमा छु । तर आफूसँग भएका सुखका अनुभूतिहरुलाई लत्कारेर मान्छे दु:खी हुँदै बाँचेको हुन्छ । भोलिको कुनै भरोसा छैन त्यै पनि मान्छे आफ्नो अहमलाई त्याग्न नसकेर पलपल तड्पिन वाध्य छ । हरक्षण हरपल उसैको नामको माला जप्दै बस्छ भने किन उ उपाय रच्न सक्दैन ? किन उ आफूले चाहेको ईच्छ्याएको कुरा पाउन खोज्दैन ? आखिर मान्छे लोभि लाछी अनि साँच्चिकै भन्नु पर्दा कातर छ । उ अन्जानमै डराईरहेको हुन्छ कतै मैले ईच्छ्याएको कुराबाट मैले चाहेजति सन्टुष्टी नपाउने त हैन ? फेरी भबिष्य यसरी नै असमन्जस र अन्योलमा रुमल्लिने त हैन ? त्यसैले बरु उ पलपल जलेर राग हुन तयार छ तर आफू भित्रको अहमपनालाई भत्क्याउन सक्ने साहस उसमा छैन । वास्तविकता यही नै हो भने उ किन सुखको खोजी गर्छ ? किन उ कसैलाई माया गरेको बहानामा दिनरात आफैलाई जलाएर भष्म गराउन वाध्य हुन्छ ? बिर्सिदियोस उसका मायाका अभिनयहरु । जलाइदियोस हृदयका पाटाहरुसँगै उसका यादहरु । अनि ति नयन भरि-भरी आफ्ना सुन्दर बर्तमानलाई सजाउन सकोस । आफ्नै वरिपरिका वास्तविकतालाई खुशीसाथ आत्मसात गर्न सकोस । तर उ सक्दैन । उसलाई आफ्नै स्वभाव सँग सधैं डराएर नै रहने बानी परिसकेको छ । बनको भूतले खाओस नखाओस उसलाई मनको भूतले खाइसकेको हुन्छ । त्यसैले उ जीवनभर आफैसँग जल्न र जलाउन वाध्य छ । बुद्धं शरणम गच्छामी: को मन्त्र जप्दै आफूलाई प्रेमी प्रेमिकाको अगाडि ब्यर्थै महान त्यागी देखाउने निरर्थक प्रयास गरिरहेको हुन्छ । अन्तमा मान्छे स्वार्थी छ । आफ्नै स्वार्थको अहमलाई पच्छ्याएर उ सुखी हुन खोज्छ तर ब्यर्थ ।।
« Reply #263 on: September 07, 2011, 08:55:55 AM »
SATYA BAHCNAM MUKHO PRABACHANAM...SANTOSHI SADANSHUKHI BHAWANTE ! RE K
« Reply #264 on: December 29, 2011, 04:17:27 AM »
नयनहरू आँशुले भिजेका छन्, मन अशान्त अस्थिर भैदिन्छ । खै के खै के मान्छेको जीवन !! सायद यसरी नै बित्छ क्यारे । चौतारीको शितलताले पनि छुन सकेन आज, झनै पोल्छ छाती झनै पो दुख्छ त हृदय ।
« Reply #265 on: January 31, 2012, 01:02:12 PM »
Wow Di kaya bat hay...hahah
« Reply #266 on: February 14, 2012, 03:13:20 PM »
« Reply #267 on: February 14, 2012, 07:28:21 PM »
Quote from: काली on February 14, 2012, 03:13:20 PM
KASKO LAGI HO YO KALI
« Reply #268 on: February 14, 2012, 07:43:17 PM »
वी लपको दौतरीलाई
« Reply #269 on: February 14, 2012, 07:49:10 PM »
Quote from: काली on February 14, 2012, 07:43:17 PM
HO RA MALAI BHANEKO TA HOINA PO RAHE6 RE K